Vaovao - Famakafakana sy fanombatombanana ny toe-draharahan'ny fanafarana entana sy fanondranana any Shina tamin'ny 2021
Eo ambanin'ilay toe-javatra marimaritra iraisana fa voafehy ny valan'aretina manerantany, miverina miadana ny toekarena manerantany, ary mitombo tsy mitsaha-mitombo ny toekarena sinoa, tombanana ho 4,9 trillion dolara amerikana ny totalin'ny fanafarana sy fanondranana an'i Shina tamin'ny taona 2021, miaraka amin'ny taona iray isan-taona fitomboana eo amin'ny 5,7%; izay, ny totalin'ny fanondranana dia manodidina ny 2,7 ​​trillion dolara amerikana, miaraka amin'ny fitomboana 6,2% isan-taona; ny totalin'ny fanafarana dia manodidina ny 2,2 trillion dolara amerikana, miaraka amin'ny fitomboana isan-taona eo amin'ny 4,9%; ary ny ambim-bolan'ny varotra dia manodidina ny 5% 76,6 miliara dolara amerikana. Eo ambanin'ny toe-javatra be fanantenana dia nitombo 3,0% sy 3,3% ny fitomboan'ny fanondranana sy ny fanafarana an'i Shina tamin'ny taona 2021 raha oharina amin'ilay toe-javatra fehizoro; eo ambanin'ny toe-javatra pessimistic, ny fisondrotan'i Shina tamin'ny fivoarana tamin'ny 2021 dia nihena 2,9% sy 3,2% raha oharina amin'ilay toe-javatra fatra.
Tamin'ny taona 2020, nandaitra ny fepetra fifehezana pnemonia coronaavirus sinoa ary ny tsenam-barotra vahiny tany Sina no notapenana voalohany, ary nitombo isa ny isan-taona. Ny habetsahan'ny fanondranana tamin'ny 1 hatramin'ny Novambra dia nahitana fitomboana 2,5% tsara. Tamin'ny 2021, ny fitomboan'ny fanafarana entana sy ny fanondranana any Shina dia mbola miatrika tsy fahatokisana lehibe.
Amin'ny lafiny iray, ny fampiharana vaksinina dia hitondra anjara biriky amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena manerantany, antenaina hihatsara ny fanondroana ireo baiko fanondranana vaovao, ary ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fiaraha-miasa ara-toekarena (RCEP) isam-paritra dia hanafaingana ny fampidirana ny varotra eo amin'i Sina sy ireo firenena mifanila aminy; etsy ankilany, tsy mihena ny firongatry ny fiarovana ny varotra any amin'ny firenena mandroso, ary mitohy mihombo ny valanaretina any ivelany, izay mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fitomboan'ny varotra ao Shina.